Date My Pet » Top Tips nokuda Kiss Great Ndezvipi anonzwa Just Perfect
Top Tips nokuda Kiss Great Ndezvipi anonzwa Just Perfect
Kissing ari chikamu zvikuru kunokosha chero kudanana. Sezvo makarekare zhinji nyanzvi ukama vakakurukura nezvekukosha kutsvoda uye ikozvino zvakawanwa kubva tsvakurudzo zvaratidza kuti kakawanda pakati kutsvoda ndiko zvekumirira kuna donongodzo kusagutsikana muukama zvakananga.
Panguva akati pakutsvakurudza zvakanzi vakawana kuti 66% vakadzi uye 59% varume dzakaguma ukama hwavo nokungoti mumwe wavo akanga asina kunaka ari kutsvoda. Izvi zvinoratidza kuti zvakaipa munhu anofanira kudzidza unyanzvi vachikisana kuti his / her ukama refu refu mumwe. Pazasi pane zvinobatsira mazano nokuda netsvodo huru.
– Edza kusiyana vachikisana pachena. Ehe, imi inonyatsokwanisa kuenda nokuda nokukurumidza pecks pachena, asi nguva dzose takachenjera kungokurumidza wakazadzwa pachena. Wakazadzwa kutsvoda vanofanira vashongedze nguva dzako dzakavanzika uye saka zviri nane kana iwe zvorudzi mavari pakahwanda kana apo hapana munhu kukuonai. Kissing toga ambotirega vose vakaroorana kuti vave vavo wakazadzwa yakanakisisa, inova huru wemafuta netsvodo kukuru.
– Vanhu vanobatanidzwa uchidanana ukama kazhinji zvakaoma kunzwisisa chii chaizvo vanofanira kuita nameno avo kana kutsvodana. Kana usingakwanisi kushandisa mazino ako kana kutsvodana, muri chairo chairo kisser zvakaipa. Dambudziko rinoita kuti tsvarakadenga nyore, asi chaizvoizvo zviri zvakaoma kuikurira.
– Kuti ave nechokwadi chokuti mazino enyu regai tazvikuvadza mudiwa wako kana kumisa pakuva wakazadzwa zvakakwana kana kutsvodana, unofanira kuva munyoro sezvinobvira apo kudzvinya miromo yako mudiwa kuti pakati pameno dzenyu. Zvadaro, zvishoma nezvishoma muvakweve (miromo mudiwa wako) negotsi, kuvabvumira hadzitedzemuki zvakanaka kuburikidza mazino ako. The chiito hakuna kuoma, chii akaoma takamuka pasina kubvumira mumwe wako kunzwisisa kuti imi vanoziva pamusoro nechinzvimbo mazino ako.
– kissers Great nguva dzose vanosarudza kuita ziso kuonana kwavo nemumwe kana kutsvodana. Ehe, pane nguva apo kissers anotsinzina meso avo kunzwa nguva, asi zvinoitika chete kana zviri netsvodo akakwana. Kuti kutsvoda yakakwana, haufaniri maziso ako rekukwazisa miromo yako neZvapupu kuti mudiwa wako. Ita ziso kuonana; regai nekuchiva nokuyerera pameso enyu mudiwa wako; Ndicho yokuwana nayo yakakwana nokusveta.
– A kisser kukuru kumbobvira anobvumira chiitiko vachikisana kuti Kuchifinha rake / her shamwari. saka, kana uchida kuva kisser akanaka unofanira kuwana nzira nechokwadi kuti chiito kutsvoda musava anofinha nokuda mudiwa wako. Imwe nzira yokuita vachikisana rinonakidza ndeyokuvandudza zvinobatanidza muviri wako wose kupinda chiito. Kurezva kupfuura erogenous nhengo dzomuviri wako mudiwa vachishandisa maoko ako uye kwiza zvinyoronyoro his / her musoro, chiso uye mutsipa. mudiwa wako Zvirokwazvo kutanga kunakidzwa nguva yakawanda.
Kuti netsvodo, netsvodo huru, unofanira kuita zvinhu vanodzorera mudiwa wako pamusoro. Basa harisi pane zvakaoma zvose; zvinongoreva inoda zvakarurama chinangwa uye yakawanda chido